မိမိတို့အနေနဲ့ ဆက်လက် စိစစ်နေဆဲ ဖြစ်ပြီး တွေ့ရှိချက်တွေကို ဆက်လက် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့လည်း AAPP ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ AAPP အတွင်းရေးမှူး ကိုတိတ်နိုင်က နိုင်ငံရေး ပုဒ်မနဲ့ ထောင်ကျသူ၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုမှာ ကူညီလို့ ထောင်ကျသူ၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားလို့ ရာဇဝတ်မှုနဲ့ စွဲချက်တင်ခံရပြီး ထောင်ကျသူ၊ ဖောက်ခွဲရေးမလုပ်ဘဲ မတရား စွပ်စွဲခံရပြီး ထောင်ကျသူတွေနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ စစ်အတွင်း ဖမ်းဆီး ထောင်ချခံရတဲ့ ရွာသားတွေကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားလို့ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားသူ စာရင်းကို နာမည်နဲ့တကွ ထုတ်ပြန်ပေးဖို့၊ ကုလသမဂ္ဂ ဦးဆောင်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေ အတွင်း ဝင်ခွင့်ပြုဖို့နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံး ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးခင်မောင်စိုးမင်းက စုစည်းတင်ပြထား ပါတယ်။
နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု ကာကွယ်ပေးဖို့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေ တောင်းဆို
ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်ထဲမှာ AAPP စာရင်းဝင် နိုင်ကျဉ်း ၁၀ ဦးခန့် ပါဝင်
နိုင်ကျဉ်းမရှိကြောင်း အကျဉ်းဦးစီး ထုတ်ပြန်ချက် နိုင်ကျဉ်းအဖွဲ့တွေဝေဖန်
AAPP ရဲ့ အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ
We would like to see the list. AARP should release the list to the public so that people can add/remove from the list.
Dec 23, 2011 08:04 PM
I would strongly suggest AARP should publicly
Dec 23, 2011 08:02 PM
မင်းတို့ လက်ရှိထောက်ပံ့နေပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်းကို အမည်နာမ၊ ထောင်အမည်နှင့်တကွ ဖော်ပြရဲလို့လား ဖော်ပြရဲရင် ဖော်ပြလိုက်စမ်းပါ။
Dec 23, 2011 06:27 PM
ငါ ထောင်ထဲက ထွက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားပါ၊ မင်းတို့ထောက်ပံ့တာဆိုတာ ဘာတပြားမှ မရဘူးပါဘူး၊ တနေ့မင်းတို့နဲ့ စာရင်းရှင်းရလိမ့်မယ်၊ အခုလည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်းဆိုတာတွေထဲမှာ စစ်အတွင်း အဖမ်းခံရတဲ့ ရှမ်းတွေထည့်ထာပြီး စာရင်းပြတယ်ဆိုတာ ဒို့သိတယ်။
Dec 23, 2011 06:25 PM